သောကြာ သားသမီးများ ထီဆုကြီးများ ပေါက်နိုင်သည့် ထီးနန်းသုံး အာယုစန်း နက္ခတ် အချိန်အခါကောင်း ဖြစ်ပါသည် – WunYan
သောကြာ သားသမီးများ ထီဆုကြီးများ ပေါက်နိုင်သည့် ထီးနန်းသုံး အာယုစန်း နက္ခတ် အချိန်အခါကောင်း ဖြစ်ပါသည်
Posted on September 13, 2018 by whuk-46651
ဒီအချိန်အခါဖြင့် မိခင်လောင်းများ…သင့်ရင်သွေးရတနာကို ခွဲစိတ်မွေးဖွားရယူပါက လွန်စွာပြည့်စုံကြွယ်ဝချမ်းသာသည့် ကဋေရှစ်ဆယ်ပိုင်ဆိုင်ကြွယ်ဝသော သူဌေးသား-သမီး ရတနာကို ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်မည်(ရှေးခေတ်ကျမ်းဂန်ပါအသုံးအနှုန်း)
ရင်သွေးမွေးဖွားပြီးသည်မှ အသက်(၈)နှစ် အတွင်း မိဘများ သုံးစွဲလို့မကုန်နိုင်အောင် ငွေကြေးအမြောက်အများ ရရှိလာမည်….သာမန်လူပင်ဖြစ်ပါစေ…မုချသူဌေးသူကြွယ်များအဖြစ် ရောက်ရှိလိမ့်မည်။
ရင်သွေး အသက်(၁၇)နှစ်မှ(၄၄)နှစ်အတွင်း ငယ်ရွယ်နုပျိုစဉ်မှာပင် ကဋေရှစ်ဆယ်ကြွယ်ဝသော မဟာသူဌေးမင်း အဖြစ် ရောက်ရှိလိမ့်မည်။လမ်းလေးခွက်ဆွဲတောင်းစားသော သူတောင်းစားပင်လျှင် နေ့ချင်း-ညချင်းသူဌေးဖြစ်နိုင်သော အံ့ဖွယ် ရတနာဓနပိုက်ဆံနက္ခတ်များဖြစ်ပေသည်.
မေတ္တာဖြင့် ပညာဒါန တွက်ချက်ဖြန့်ဝေပေးပါသည်။ မိမိကိုယ်တိုင် ထောင်ထွက် မျက်နှာမွဲ ဘ၀မှ နိုင်ငံတော်အဆင့်ထိပ်တန်းပညာရှင်….ကြွယ်ဝပြည့်စုံသော ပညာရှင်အဖြစ် ရပ်တည်ရှင်သန်လာနိုင်ခဲ့သော လျှို့ဝှက်နက္ခတ် များအနက်မှ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါကြောင်း….
သောကွာ သားသမီးမြား ထီဆုကွီးမြား ပေါကျနိုငျသညျ့ ထီးနနျးသုံး အာယုစနျး နက်ခတျ အခြိနျအခါကောငျး ဖွဈပါသညျ
ဒီအခြိနျအခါဖွငျ့ မိခငျလောငျးမြား…သငျ့ရငျသှေးရတနာကို ခှဲစိတျမှေးဖှားရယူပါက လှနျစှာပွညျ့စုံကွှယျဝခမျြးသာသညျ့ ကဋရှေဈဆယျပိုငျဆိုငျကွှယျဝသော သူဌေးသား-သမီး ရတနာကို ရယူပိုငျဆိုငျနိုငျမညျ(ရှေးခတျေကမျြးဂနျပါအသုံးအနှုနျး)
ရငျသှေးမှေးဖှားပွီးသညျမှ အသကျ(၈)နှဈ အတှငျး မိဘမြား သုံးစှဲလို့မကုနျနိုငျအောငျ ငှကွေေးအမွောကျအမြား ရရှိလာမညျ….သာမနျလူပငျဖွဈပါစေ…မုခသြူဌေးသူကွှယျမြားအဖွဈ ရောကျရှိလိမျ့မညျ။
ရငျသှေး အသကျ(၁၇)နှဈမှ(၄၄)နှဈအတှငျး ငယျရှယျနုပြိုစဉျမှာပငျ ကဋရှေဈဆယျကွှယျဝသော မဟာသူဌေးမငျး အဖွဈ ရောကျရှိလိမျ့မညျ။လမျးလေးခှကျဆှဲတောငျးစားသော သူတောငျးစားပငျလြှငျ နခေ့ငျြး-ညခငျြးသူဌေးဖွဈနိုငျသော အံ့ဖှယျ ရတနာဓနပိုကျဆံနက်ခတျမြားဖွဈပသေညျ.
မတ်ေတာဖွငျ့ ပညာဒါန တှကျခကျြဖွနျ့ဝပေေးပါသညျ။ မိမိကိုယျတိုငျ ထောငျထှကျ မကျြနှာမှဲ ဘဝမှ နိုငျငံတျောအဆငျ့ထိပျတနျးပညာရှငျ….ကွှယျဝပွညျ့စုံသော ပညာရှငျအဖွဈ ရပျတညျရှငျသနျလာနိုငျခဲ့သော လြှို့ဝှကျနက်ခတျ မြားအနကျမှ တဈစိတျတဈပိုငျးဖွဈပါကွောငျး….